Harley-Davidson Of Mandalay, Myanmar. Hire Purchase System. | Harley-Davidson® of Mandalay, Myanmar
‹ Home › Latest news › Harley-Davidson Of Mandalay, Myanmar. Hire Purchase System.
Harley-Davidson Of Mandalay, Myanmar. Hire Purchase System.
08 ဇနျနဝါရီ 2019
Harley-Davidson® Of Mandalay, Myanmar ၏ New Harley-Davidson® Motorcycle များကို၊ လူကြီးမင်းတို့ အရစ်ကျဝယ်ယူခြင်း ( HIRE PURCHASE) စနစ်ဖြင့် ပိုင်ဆိုင်နိုင်ပါပြီဖြစ်ကြောင်း၊ သတင်းကောင်းပါးအပ်ပါတယ်။
Harley-Davidson® Of Mandalay, Myanmar. AGD Bank. First National Insurance (FNI). တို့ နှင့်အတူလုပ်ငန်းစဉ်များကို ရှင်းလင်းမြန်ဆန်စွာ လုပ်ဆောင်ပြီးနောက်၊ ကြိုက်နှစ်သက်ရာ Harley-Davidson® Motorcycle တစ်စီးပိုင်ဆိုင်ပြီး၊ လှပပြီးပြည့်စုံတဲ့ ခရီးများကို စတင်နိုင်ပါပြီ။
Motorcycle တန်ဖိုး၏ 30% Down-payment (ကနဦးပေးချေမှု) နှင့်စတင်ပြီးနောက်၊ ကျန်ရှိတဲ့ Motorcycle တန်ဖိုး 70% ကို၊ မိမိကြိုက်နှစ်သက်သလို 1-Year(or)2-Year အနေဖြင့်ဝယ်ယူမှု ဆောင်ရွက်နိုင်ပါပြီ။
New Harley-Davidson® Motorcycle အတွက် First National Insurance (FNI) ကလည်း၊ လူကြီးမင်း ရွေးချယ်ထားသည့် (HIRE PURCHASE) စနစ် 1-Year(or)2-Year အတိုင်း၊ အလုံးစုံအာမခံထားပြီး ကာကွယ်စောင့်ရှောက်လို့ လုံခြုံမှုပေးထားမှာဖြစ်ပါတယ်။
ယခုပင် ဒီအခွင့်အရေးကို Harley-Davidson® Of Mandalay, Myanmar Dealership ကိုချိတ်ဆက်လို့ ရယူပိုင်ဆိုင်နိုင်ပါပြီ။